တောင်ကုတ်မြို့အကြမ်းဖက်မှုပေါ်ပေါက်ရေးနှင့်ရခိုင်ပြည်နယ်ဖြစ်စဉ်များ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Contributors » တောင်ကုတ်မြို့အကြမ်းဖက်မှုပေါ်ပေါက်ရေးနှင့်ရခိုင်ပြည်နယ်ဖြစ်စဉ်များ
- hnin sai
Posted by hnin sai on Jun 13, 2012 in Contributors | 16 comments
မေလ ၂၈ ရက်။ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ကျောက်ဖြူခရိုင် ရမ်းဗြဲ မြို့နယ် ကျောက်နီမော်ကျေးရွာ
အုပ်စု သပြေချောင်းကျေးရွာနေ မသီတာထွေးအား “အဓမ္မကျင့်၊ လူသတ်၊ ပစ္စည်းလု” မှုဖြစ်ပွားသည်။
၄၀၀၊ ၅၀ဝရာ ဘာတွေနဲဘယ်အချိန်ကဘဲရောက်လာလဲ
ဖန်တီး .ပြီးတော့စစ်တွေ . .၎င်းတို့ထွက်ထားတဲ့ဓါတ်ပုံကကောင်းကောင်းမွန်မွန်မပါ၊ဒါပေမယ်လူဗြိန်းတွေယုံ၏
ဒါပေမယ်သိသူရှိ၏၊ကြည့်တတ်သူမြင်၏၊တရားခံတွေဓါတ်ပုံတိုင်းပါ၏ . .အောက်ခေါင်းစီး
ကလူမျိုးခြားလုပ်တာ၊ကိုယ်အိမ်ကို်ယ်မီးရှိုသတဲ့၊ကိုယ်ဈေးကိုယ်ရှိုသတဲ့ယုံစရာသတင်းဆောင်းပါ . .
ဒါပေမယ်မလုပ်ဘူး . .ခင်ဗျားတို့သိအောင်လုပ် . .
ွပြီးတော့ရန်ကုန် . . ပြီးတော့့့
ဒီလိုနဲ့ပြဿနာမီးခိုးကြွက်ရှောက်ဖြစ်ကုန်ရော . . .ပြီးတောသူတို့လိုချင်တာ
တရားဟောသေး ..ဒီလိုဒီလို့ပါ . .သိသူကြည့် . .ကြည်သူမြင်၏ .အမှန်တရားသင်တို့နဲ့အနီးလေး
လှူဒါန်းမှုတွေကိုဒေါ်စုပြောသွား၏ နှစ်ဖက်စလုံးလှုပါ့တဲ့ ၊ဒါမှတရားမျှတမည်တဲ့၊
About hnin sai
hnin sai has written7post in this Website..
View all posts by hnin sai →
Is that all fucking foolish ideas come out from your brain, full of shit? Just mad will believe and accept your heart-breaking story.
ခါတော်မှီ အကောင့် နဲ့ကုလားကျင့်ကုလားကြံ ပိုစ် အသစ် တင်ချင်တဲ့သူတွေ တင် လို့ ့ရနေ ပါလား အသစ်တက်လို ့ဝင်ဖတ် ပေါက်ကရ စာ နဲ့ တိုး အချိန်တွေ နှမျျော စရာ ဂေဇက် ရဲ့ နောင်ရေး အတွက် စီ စစ်ရေး လုပ်ပိုင် ခွင့် ရှိ သူစီ စစ်ပေး ရင်ကောင်းမယ်
သဂျီးရေ သဂျီးအမိန့် စည်းကမ်းကဘယ်ရောက်သွားပြီလဲ။
သဂျီးရဲ့ နှစ်လုံးပြူး သံချေးတက်နေတယ်ဆိုတာ သေချာသွ ားပြီ ….. ။
လောက်လေးခွကိုင်ထားတဲ့ ….. မော်ဒရိတ်တာတွေရှိတယ်ဆိုတာ ကြားဖူးတယ် …… ။ သူတို့ရော ဘယ်ရောက်နေကြပါလိမ့်နော် …… ။
com တင်တာလူသစ်… အင်း..
အဲ့ ဒိ စကားရပ်ထဲ က ့အင်း့ဆို တဲ့ စကား ရပ်လေး က ဘယ် သဘော လဲ ဆို တာ မသိပေ မဲ့ တမျ ိး ဖြစ်နေ လားလို့com တင် တာ လူ သစ် ဆို တာ ကျွန်တော် ့ကို များ ရည် ညွှ န်း ခဲတာ ဆို ရင်တော ့တခုလောက် ရှင်းပြ ချင် လို့ကျွန်တော် က စာဖတ်သူ သက်သက်ပါ ဝင်ရေး ရန် ကွန် မင့် ပေးရန် စိတ်မ ဝင်စား သဖြင့် ရက်ဂျစ်စတာ မလုပ်ဘဲ ဝင်ဖတ်နေတာ တနှစ် ခန် ့ရှိ ပါ ပြီ ခုတလော မှ အမြင်မတော် တာ မြင်နေ ရ လို ့မနေနိုင်မထိုင်နိုင် ရက်ဂျစ်စတာ လုပ် ပြီးဝင် မန့် မိတာ ပါ မကောင်းစိတ်ထား ဖြင့် တခု မှ မပြော ခဲ့ ပါ ခွေး ဟောင် တိုင်းလဲ ထမကြည် ့တတ်ပါဘူး ခု ကတခါတလေ ထချောင်းပြီး စိတ် ထဲ နဲနဲ ခုလုခုလု ဖြစ်သွား လို့ပြန်ပြော မိတာ ပါ အမှားပါရင်ခွင့်လွှတ် ပါ
တောင်ကုတ်မြို.မှာ ဘယ်သူတွေ အများဆုံးနေတာလဲ ဗျ………. ဒါလေးပဲပြောပြပေးပါ.
အားပေးတဲ့ အနေနဲ့ လက်မလေးကို အောက်စိုက်လိုက်ပါတယ်။
နောက်ထပ်ဆိုရင်တော့ အဆဲလေးတွေပါ ချီးမြှင့်ပေးပါမယ်။
ခေတ်ကအရမ်းနောက်ပြန်ဆွဲနေတော့ အားလုံးကအချိန်လွန်တော့မှ အော်… အဲဒီတုန်းက အဲဒါကိုပြောနေတာကိုး ဆိုပြီးနားလည်ကြတယ်လေ၊ ဒါပေမဲ့နောက်ကြကုန်ပြီဗျာ။ ဒီလိုဝန်ခံတာ လူတော်ပါ။
နှစ်ခေါက်ဖတ်တာတောင် … ဆိုလိုရင်းကို ဂဃနဏ သဘောမပေါက်နိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ် ……. ။ ကိုယ်ကပဲ ဉာဏ်မမှီလို့လား မသိဘူး ………
hnin sai ညီလေးရေ ဆောတီးနော် စားကောင်းလါး၊ နေကောင်းလါး၊ ဘယ်မှာလည်း၊ ဟိုတယ်သွားရအောင်
ဒါဘဲသိတဲ့ ချက်တင်သမားတွေဆိုတော့ ခွင့်လွတ်လိုက်ပါကွာ။ ကိုကြီးမိုက် ဝင်းကို
Member တဦးသည် အခြားMemberအပေါ် ပုဂ္ဂလိကဆိုင်ရာ.. မှတ်ချက်/ထင်မြင်ချက် ပေးရန် လုံးဝ(လုံးဝ)အခွင့်မရှိ….
ဗျို့ သဂျီး အဲဒါဘာဂျီးတုန်း။ စည်းကမ်းမလိုက်နာတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွေပြန်စလာပြန်ဘီဗျို့။
သူ ရေးတဲ့ အတိုင်း ဆို ဒီ ကိစ္စ ကို နဲနဲ တွေးကြည့် မယ် နော်။
ခု ခေတ် မီဒီယာ တွေ လက် ကလဲ သွက်မှ သွက်။ ၂ သိန်းတန် ကြောင့် လူတော်တော် များများ လဲ ကင်မရာ ပါတဲ့ ဖုံးတွေ ကိုင်နိုင် နေတဲ့ အချိန်၊ ၂သောင်း ၃သောင်း တန် MP4 တွေမှာ လဲ ကင်မရာ က ရုပ်ထွက် အကောင်း ကြီး မဟုတ်တောင် နေ့လည်ခင်းမှာ အသင့်အတင့် ပုံ တော့ ရိုက်လို့ရ နိုင်တယ်။
ဘာပြောပြော လူ ၁ဝ ယောက် ကို သတ်တဲ့ အချိန် အရ ဆို အခင်း ဖြစ်နေစဉ် ပုံ တစွန်း တစ တော့ ရှိ ရ မှာ။ခု ဟာ က အခင်း ဖြစ်နေတဲ့ ပုံ တခု လေး တောင် ဘယ်မီဒီယာ ၊ ဘယ် web page၊ ဘယ် facebook စာမျက်နှာ မှာ မှ မတွေ့ ရဘူး။ သတ်ပြီး လို့ သေ နေတဲ့ ပုံ ကတော့ ဖျက် ပြစ် လဲ ထပ် တင်မယ် ဆို ပြီး ခဏခဏ တွေ့ ရတယ်။
ခု အရေး ဖြစ်လာ အောင် လို့ သူတို့ အချင်းချင်း ပဲ စတေး ခံ သတ် ပြ လိုက်တာ လား။
Shwe Ei ရေ ဆဲတာမဟုက်ဘူးနော် ဗမာစကားပါ သေချာစဉ်းစားအုံး၊ အင်တာနက်စုန်းပြူးတွေ ရှင်းနေတာပါ။ http://www.facebook.com/media/set/?set=a.482823941733642.110392329.100000181218020&type=3&l=a6af18c97d
ပြဿနာတွေ အဖြေရှာမရတာတော့ ကျနော်လဲ နားမလည်နိုင်တော့ပါ။
ဒါနောက်ဆုံးပါ အားလုံးရဲ့အင်အားတွေလိုပါတယ် အင်တာနက်မှာမဟုက်ပါဘူး ဗမာလူမျိုးတွေဖြစ်တဲ့အတွက် အလယ်အလတ်လမ်းစဉ်ကို လုပ်ကြမယ်ဆိုရင် အာလုံးကို လါတွေ့ချင်ပါတယ် အင်တာနက်တွင် ဘယ်သူတွေက ဘာတွေမှန်းမသိတဲ့အတွက် ရှင်းပြလို့မရပါထို့ကြောင့်တွေ့ဆုံမှသာလျှင် လက်တွေ့ပြောပြလို့ရပါမည်။
အားလုံးကိုတောင်းပန်လျှက်။ ဝင်းကို ဝ၉၅ဝ ၈၂၈၀၈